Shigella infection (ရှီဂယ်လိုးစစ်) - Page 16 of 21 - Hello Sayarwon
Shigella infection (ရှီဂယ်လိုးစစ်)
Thin Myat Sandi Cho မှ ရေးသားသည်။ 28/01/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ရှီဂယ်လားဘတ်တီးရီးယားအုပ်စုဝင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အူလမ်းကြောင်းရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကလက္ခဏာက ဝမးလျှောခြင်းသွေးပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရှီဂယ်လားက ဝမ်းထဲမှာပါတဲ့ရှီဂယ်လားအကောင်ကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မိဖြင်းဖြစ့် ကူးစက်နုငိပါတယ်။ ဥပမာ= ကလေးထိန်းကျောင်းတွေမှာ ဝန်ထမ်းတွေက ဒိုင်ပါလဲပြီးနောက်သို့ ကလေးပိစိကွေးတွေအိမ်သာသွားခြင်းအတွက် အကူအညီပေးပြီတောက်မှာ လက်ကေိုသေချာမဆေးခြင်းကနေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရှီဂယ်လားဘတ်တိးရီးယားက ကူးစက်ပိုးပါတဲ့အစားအစာစားခြင်း၊ သောက်ခြင်း၊ ကူးစက်ပိုးပါတဲ့ရေထဲမှာရေကူးခြင်းတွေကနေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
Shigella infection (ရှီဂယ်လိုးစစ်) ကဘာလဲ။
Shigella infection (ရှီဂယ်လိုးစစ်) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အသသက်၂နှစ်နဲ့၄နှစ်ကြားကလေးတွေမှာ ရှီဂယ်လားကူးစက်နိုင်ချေအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ စီဒီစီရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးစင်တာရဲပနှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်ချက်အရ
၁၉၇၈-၂၀၀၃အတွင်း ဖြစ်ပွားသူအယောက်၁၇၀၀၀ကျော်၊ ၂၀၀၄မှာ အယောက်၁၄၀၀၀၊ ၂၀၀၇မှာအယောက်၂၀၀၀၀နီးပါးဖြစ်ပါတယ်။
Shigella infection (ရှီဂယ်လိုးစစ်) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရှီဂယ်လိုးစစ် ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့-
ဝမ်းရစ်နြာခ်ငး( အူလမ်းကြေင်းထဲမှာဘာမှမရှိဘဲနဲ့တောင် ဝမ်းသွားချင်သလိုနာခြင်း)
သင့်ကလေးမှာ သွေးဝမ်းသါားနေရင်ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်အလေးချိန်ကလောက်အောင်၊ ရေဓါတ်ခန်းခြောက်စေလောက်အောင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝမ်းသွားနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့အရေးပေါ်ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။ သင်သို့မဟုတ်သင့်ကလေးမှာ ဝမ်းလျှောနေပြီး အဖျားက ၁၀၁ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်သို့အထက်မှာရှိနေရင် ဆရာဝန်နဲ့ပြသင့်ပါတယ်။
Shigella infection (ရှီဂယ်လိုးစစ်) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မတော်တဆ ရှီဂယ်လားဘတ်တီးရီးယားကို မျိုချမိတဲ့အခါမှာ ကူးူစကိပိုးဖြစ်ပါားပါတယ်။ အောက်ပါအခြေအနေတွေမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပါးစပ်ကိုကိုင်ခြင်း- ရှီဂယ်လားကူးစက်ပိုးရှိတဲ့ကလေးရဲ့ဒိူုင်ပါကိုလဲပေးပြိးလက်မဆေးခြ်ငးက သင့်ဘာသင်ပြန်ကူးစက်စေနိုင်ါပတယ်။ လူတစ်ယေက်နဲ့တစ်ယောက်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ြခ်းက ရောဂါပြန့်နှ့ရာမှာ အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကူးစက်ပိုးပါတဲ့အစားအစားများကိုစားခြင်း၊ အစာကိုကိုင်တွယ်တဲ့ကူးစက်ပိုးရှိတဲံလူကနေ ဘတ်တီးရီးယးက စားတဲ့လူတွေဆီရောက်သွးပါတယ်။ အားအစာက မိလ္လာအညစ်အကြေးတွေနေရာမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့အစားအစာကိုကူးစကပ်နိုင်ပတယ်။
ရောဂါပိုးပါတဲ့ရေကိုသောက်ခြင်း- မိလ္လာကနေဒါမှမဟုတ် ရောဂါပိုးရှိတဲ့လူကူးနေတဲ့ရေကူးကန်တွေမှာ ရေထဲမှာကူးစက်ပိုးပါနိုင်ပါတယ်။
Shigella infection (ရှီဂယ်လိုးစစ်) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ရှီဂယ်လိုးစစ် ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
ကလေးပိစိကွေးလေးမျး- အသက်၂နှစ်နဲ့လေးနှစ်ကြားကလေးတွေမှာ အဖြစ်အများဆုံးစြဖပါတယ်။ အိုးအိမ်များမှာနေထိုင်ခြင်း အုပ်စုလိုက်လှုပ်ရှားမှုများမှာပါဝင်ခြင်း။ အခြားလူတွေဆီကအနီးကပ်ထိတွေ့ခြင်းကနေလေည်း လူတစ်ယောက်ကနေတစ်ယောက်ကိုကူးစက်ုနငိပါတယ်။ ရှီဂယလားရောဂါပိုးပျံ့နျံခြင်းက ကလေးစောင့်ရှောက်မှုစင်တာတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ စောင့်ရှောက်မှုဂေဟာတွေ၊ အကျဉ်းထောင်တွေနဲ့ စစ်တပ်စစ်တန်းလျားတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။
စနစ်တကျအညစ်အကြေးစွန့်ပစ်ခြးမရှိတဲ့ဒေသတွေမှာ နေထိုင်ငြခ်းသို့ ခရီးသွားခြင်း- ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကိုခရီးသွားတဲ့လူတွေ နေထိုနင်တဲ့လူတွေမှာ ပိုပြိးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လိင်စိတ်တက်ကြွနေတဲ့မိန်းမလျာများဖြစ်နေခြင်း။ အမျိုးသားချင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းတွေမှာ ပိုဖြစ်နိင်ချေများပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဆင့်ခံ ပါးစပ်၊စအိုဝထိတွေ့မှုကြေင့် ဖြစ်ပါတယ်။
Shigella infection (ရှီဂယ်လိုးစစ်) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ပိုးအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကနေ ဝမ်ေးလျှာခြင်းကိဖြစ်စေနိုငတာကြောင့် အောကာင်းရင်းကိုရှာခြင်းက ကုသမှုမှာအထောက်အကူပြုပါတယ်။ ကျန်းမျာရေးစောင့်ရျောက်မှုပေးသူတွေက ကူးစက်ခံနေရတဲ့လူနာရဲ့ဝမ်းထဲမှာ ရှီဂယ်လားပါမပါ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခြ်င်းတွေလုပါပါလမ့်မယ်။ ဓါတ်ွဲခန်းက ကူးစက်ပိုးကိုကုသဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့်ပိုးသတ်ဆေးကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖိုအထူးစစ်ဆေးခြ်ငးတွေကိုလည်း ဲပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Shigella infection (ရှီဂယ်လိုးစစ်) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ငါးရက်ကနေ ခုနစ်ရက်အတွင်း ရောဂါကူးစက်ပျံနှံပါတယ်။ ဝမ်ေးလျှာခြင်းကြောင့်အရည်ဓါတ်ဆုံးရူး့ခြင်းကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးခြင်းဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့်သင်ံအထွေထွေကျန်းမာရေးကောင်းပြီး သင့်ကူးစက်ပိုးရှီဂယ်လးကူးစက်ပိုးက မဆိုသလောက်ကူးစက်ခံရတဲ့အခါမှာဖြစ်ပါတယ်။
လိုပရာမိုဒ်လိုမျိုး အေထရိုပင်းလိုမျိုး ဝမ်းလျှောခြင်းကိုကုသဖို့အတွက်ဆေးတွေကို ရှောင်ပါ။ သင့်အခြေအနေကိုပိုဆိုးသါားစေနိုင်တာကြေင့်ဖစ်ပါတယ်။
ပြင်းထန်ရှီဂယ်လားကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းအတွက် ပိုးသတ်ဆေးတွေက နာမကျန်းမှုအချိန်ကာလကိုတိုတောင်းစေပါတယ်။ အချို့သောရှီဂယ်လားပိုးတွေက ဆေးမတိုးာတမျိုးလညးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အခြေအနေမပြင်းထန်ဘူးဆိုရင် ပိုးသတ်ဆေးအသုံးမပြုခြင်းက ပိုကောင်းပါတယ်။
ပိုးသတ်ဆေးတွေက ကလေးများ၊ အသက်ကြီးသူများ ၊ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီရောဂါသည်များ၊ ရောဂါပျံ့ပွားလွယ်တဲ့အခြေအနေမြင့်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ လိုအပါ်ပါတယ်။
အထွေထွေကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူတွေအတွက ်ရေသောက်ခြင်းက ဝမ်းလျောခြင်းကြေင့်ဖစြတဲ့ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်းပြဿနာအတွက် လုံလောက်ပတယ်။
ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေဓါတ်ခန်းခြောက်သါားတဲ့ကလေးတွေနဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် ပါးစပ်ကနေထက် အကြောကနေဆားနဲ့အရည်တွေကိုသွင်းပေးနိုင်တဲ့အရေးပေါ်ဆေးရုံကုသမှုအခန်းတွေမှာ ကုသဖိုပလိုပါတယ်။ အကြောဆေးသွင်းပေးခြင်းက သင့်ခန္ဒကိုယ်ကို အရည်နဲ့အရေးပါတဲ့အာဟာရတွေကို ပါးစပ်ကနေသာက်ခြင်းထက် ပိုမိုလျင်မြန်စွာရောက်ရှိသွားစေနိုင်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက ရှီဂယ်လိုးစစ် ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် ရှီဂယ်လိုးစစ်ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုပြီးောနက် ဒိုင်ပါလဲတဲ့နေရာတွေမှာ ပိုးသတ်ပေးခြင်း
ကလေးဝမ်းလျှောနေချိန်တွင် ကလေးစောင့်ရှောက်မှုဂေဟာ၊ ကျောင်းနဲ့ ကစားတဲ့နေရာတွေကိုမသွားစေခြင်း
ဝမ်းလျှောနေသူနဲ့ ဒါမှမဟုတ် မကြာသေးခင်မှဝမ်းလျှောထားသူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/shigella/basics/definition/con-20028418. Accessed August 1, 2017.
https://www.cdc.gov/shigella/general-information.html. Accessed August 1, 2017.
The Incidence of Shigella Infection.
http://www.about-shigella.com/shigella_incidence. Accessed August 1, 2017.